Wasiirka wasaradda waxbarashada Hidaha iyo Taclinta Sare Mudane Cabdulaahi Goodex Barre oo magaalada muqdisho ku soo dhaweyay Agaasimaha Guud ee Hay’adda UNESCO Audrey Azoulay iyo wafdi ay hogaamineyso. – Ministry Of Education
Wasiirka wasaradda waxbarashada Hidaha iyo Taclinta Sare Mudane Cabdulaahi Goodex Barre oo magaalada muqdisho ku soo dhaweyay Agaasimaha Guud ee Hay’adda UNESCO Audrey Azoulay iyo wafdi ay hogaamineyso.
In Wararka, Warbixino / February 20, 2020
Wasiirka wasaradda waxbarashada Hidaha iyo Taclinta Sare Mudane Cabdulaahi Goodex Barre ayaa magaalada muqdisho ku soo dhaweyay Agaasimaha Guud ee Hay’adda UNESCO Audrey Azoulay iyo wafdi ay hogaamineyso.
Soo dhaweeyn kadib Waxa ay ka saxiixdeen heshiis iskaashi oo ah dhanka horumarinta Waxbarashada ayadoo loo adeegsanayo tiknoolajiyada iyo xagga dhaqanka iyo goobaha taariikhiga ah.
Waxey kulan wadajir ah la qaateen Ra’iisul wasaaraha JFS oo bogaadiyey heshiiska, islamarkaasna uga mahadceliyey booqashadeeda oo ah tii ugu horeysay ee uu Agaasime guud ee UNESCO ku yimaado dalka Soomaliya Taas oo qayb ka ah dadaalad wasiirku ugu jiro soo celinta hanaanka waxbarasho iyo dhaqan soomaliyeed. Kulankan ay heshiiska ku kala saxiixaneynay waxaa goob joog ka ahaa ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xassan Cali Kheyre iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan.